KEDU ỌDỤ ỤGBỌ MMIRI TEAMVIEWER JI? - TEAMVIEWER - 2019
Nlekọta vidio vidio vidio YouTube dị mma iji jiri ikike, n'ihi na mgbe ịbanye n'ime akaụntụ gị, ị nwere ike ọ bụghị nanị ịdenye aha na ọwa ma hapụ ihe n'okpuru vidiyo, ma hụkwa ndụmọdụ ndị ahaziri iche. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịhụ ọrụ nke ọdịiche dị iche - mkpa ọpụpụ akaụntụ gị. Otu esi eme nke a, anyị ga-atụle n'ihu.
Jiri na akaụntụ YouTube gị
YouTube, dị ka ị maara, bụ Google nwe ya, ọ bụ akụkụ nke ọrụ ndị nwe ụlọ, nke bụ otu e kere eke. Iji nweta nke ọ bụla n'ime ha, a na-eji otu akaụntụ ahụ eme ihe, ma ihe dị mkpa na-esite na nke a - enweghi ike ịpụ site n'otu saịtị ma ọ bụ ngwa, a na-arụ ọrụ a maka akaụntụ Google dịka dum, ya bụ, maka ọrụ niile n'otu oge. Tụkwasị na nke ahụ, enwere nghọta dị iche iche na-eme otu usoro ahụ na ihe nchọgharị weebụ na PC na onye na-achọgharị ekwentị. Anyị na-aga n'ihu nyochaa nke ọma.
Nhọrọ 1: Nchọgharị Kọmputa
Ịbanye na akaụntụ YouTube na ihe nchọgharị weebụ bụ otu maka mmemme niile nke ụdị a, ma Google Chrome a ga-eme ihe dị oke njọ (ọ bụ na ọ bụghị maka ndị ọrụ niile). Kedu nke ị ga - amụtakwu, mana dị ka nke mbụ, ihe zuru oke na nke zuru ụwa ọnụ, anyị ga - eji ngwugwu "asọmpi" - Yandex Browser.
Ihe nchọgharị ọ bụla (ma e wezụga Google Chrome)
Site na ibe ọ bụla na YouTube, pịa foto profaịlụ gị na akụkụ aka nri elu nke ibe.
Na nhọrọ nhọrọ nke ga-emeghe, họrọ otu n'ime nhọrọ abụọ dịnụ - "Gbanwee akaụntụ" ma ọ bụ "Akara".
N'ụzọ doro anya, ihe mbụ nyere ikike ịgbakwunye akaụntụ nke abụọ maka YouTube. A gaghị emepụta ụzọ ọpụpụ site na nke mbụ, ya bụ, ị ga-enwe ike ịgbanwe n'etiti akụkọ dịka ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na nhọrọ a dabara gị, jiri ya - banye na akaụntụ Google ọhụrụ. Ma ọ bụghị ya, pịa bọtịnụ ahụ. "Akara".
Mgbe ị na-abanye na akaụntụ gị na YouTube, kama na foto profaịlụ nke mụ na gị kpọtụrụ na nkwụsị mbụ, "Nbanye".
Ihe na - adịghị mma anyị kwuru na mbụ bụ na ị ga - enweta ikikere, gụnyere na akaụntụ Google gị. Ọ bụrụ na ọnọdụ a dabara gị, ọ bụ ihe magburu onwe ya, ma ọfụma, maka iji ọrụ nke Ụlọọrụ nke Ezi, mee ka ị banye ọzọ.
Ebe ọ bụ na Chrome bụkwa ngwaahịa Google, a chọrọ ikike na akaụntụ maka ọrụ nkịtị. Omume a agaghị enye gị ohere ịnweta ọrụ niile na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ma rụọ ọrụ arụmọrụ data.
Ịdebanye na akaụntụ YouTube gị, nke a na-eme kpọmkwem n'otu ụzọ ahụ dị na Yandex Browser ma ọ bụ ihe nchọgharị weebụ ọ bụla, Chrome ga-enwe ọhụụ ọ bụghị nanị nsị nke a na-amanye site n'akụkọ Google gị, kamakwa nkwụsịtụ nke mmekọrịta. Ihe oyiyi dị n'okpuru na-egosi ihe yiri ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe siri ike ịbanye na akaụntụ gị gaa na YouTube na ihe nchọgharị maka PC, ma ihe ndị na-esi na ya pụta agaghị adabara onye ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ohere ịnweta ohere zuru ezu na ọrụ Google na ngwaahịa dị gị mkpa, ị nweghị ike ime n'enweghị akaụntụ.
Nhọrọ 2: Ngwa maka gam akporo na iOS
Na ngwa vidiyo YouTube, nke dị maka ngwaọrụ mkpanaka niile na gam akporo na iOS n'ụgbọ, enwekwara ike ịpụ apụ. N'eziokwu, usoro nhazi nke Google na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya karị. Ka anyi malite ya.
Ọ bụrụ na naanị otu akaụntụ Google dị n'ekwentị gam akporo gị ma ọ bụ mbadamba, ị nwere ike apụ ya naanị na ntọala usoro. Mana ọ dị mkpa ịghọta na imechara nke a, ọ bụghị naanị na ị ga-esi na ọrụ ụlọ ọrụ ahụ pụta, kama ị ga-enwekwa ohere ịnweta akwụkwọ adreesị gị, ozi-e, ikike ịghachite ma weghachite data site na igwe ojii, dịkwa oke mkpa, na Google Play Market, ya bụ, ọ bụghị Ịnwere ike iwunye ma melite ngwa na egwuregwu.
Dị ka ọ dị na ihe nchọgharị weebụ na kọmputa, malite Youtube, pịa foto nke profaịlụ gị.
Na menu nke a ga-emeghe n'ihu gị, enweghi ike ịpụ na akaụntụ - ọ nwere ike gbanwere site na ịgbanyere onye ọzọ ma ọ bụ tinye ya na mbụ.
Iji mee nke a, buru ụzọ pịa ihe e dere "Gbanwee akaụntụ"wee họrọ ya ma ọ bụrụ na ejikọrọ ya na mbụ, ma ọ bụ jiri akara ngosi ahụ "+" iji tinye ihe ọhụrụ.
Debanye na nbanye (mail ma ọ bụ ekwentị) na paswọọdụ site na akaụntụ Google gị, na ịpị na nke ọ bụla n'ime nzọụkwụ abụọ ahụ "Na-esote".
Gụọ usoro ikikere na pịa "Nabata", wee chere ka nkwenye ahụ mezue.
Mgbe ịmechara usoro ndị a, ị ga-abanye na YouTube na akaụntụ dị iche, na nhazi ntọala ị ga-enwe ike ịgbanwe ọsọ ọsọ n'etiti ha.
Ọ bụrụ na mgbanwe nke akaụntụ, nke pụtara ntinye mbido ya, ezughị oke, ma kpebisiri ike ịpụ ọ bụghị nanị site na YouTube, kama site na Google n'ozuzu, ịkwesịrị ime ihe ndị a.
Meghee "Ntọala" ngwaọrụ mkpanaka gị ma gaa "Ndị ọrụ na Akaụntụ" (ma ọ bụ ihe yiri ya, ebe aha ha nwere ike ịdị iche na nsụgharị dị iche iche nke gam akporo).
Na ndepụta nke profaịlụ ejikọrọ na smartphone ma ọ bụ mbadamba, chọta akaụntụ Google ịchọrọ ịpụ, ma pịa ya ka ị gaa na ibe ozi, wee pịa "Hichapụ akaụntụ". Na windo na arịrịọ ahụ, kwadoro ebumnuche gi site na ịpị ụdị edemede ahụ.
A ga-ehichapụ akaụntụ Google ahụ ị họpụtara, nke pụtara ị pụta ọ bụghị naanị na YouTube, kamakwa site na ọrụ ndị ọzọ na ngwa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Hụkwa: Otu esi abanye na akaụntụ Google na gam akporo
Rịba ama: Oge ụfọdụ (ọtụtụ mgbe, ọ bụ na nkeji), mgbe usoro ahụ ga - 'gbapụ' ụzọ ọpụpụ si akaụntụ gị, YouTube nwere ike iji rụọ ọrụ n'enweghị ikike, mana n'ikpeazụ, a ga-ajụ gị ka ị "Nbanye".
Hụkwa: Otu esi abanye n'ime akaụntụ Google na gam akporo
N'otu aka ahụ, omume na ihe nchọgharị na PC, na-ahapụ akaụntụ na YouTube, ma ghara ịgbanwe ya, gụnyere ọtụtụ ọnụọgụ kachasị mma. N'ihe banyere gam akporo, ha na-abawanye njọ, ebe ọ bụ na ha na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịnweta ọtụtụ n'ime isi ọrụ nke sistemụ arụmọrụ mobile, nke anyị depụtara na mmalite nke akụkụ a nke isiokwu.
Ebe ọ bụ na Apple ID bụ ọrụ bụ isi n'ime ohia apple, ọ bụghị akaụntụ Google, ịbanye na akaụntụ YouTube gị dị mfe karị.
Dị ka ọ dị banyere Android, site na-agba Youtube, kpatụ ihe oyiyi profaịlụ gị n'akụkụ aka nri.
Na ndepụta nke nhọrọ dịnụ, họrọ "Gbanwee akaụntụ".
Tinye akaụntụ ọhụrụ site na ịpị akara ngosi kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ pụọ na ugbu a eji site na ịhọrọ "Lelee YouTube n'ebughị ịbanye na akaụntụ gị".
Malite n'oge a gaa n'ihu, ị ga-ekiri YouTube na-enweghị ikike, nke a ga-akọ, gunyere aha nke na-egosi na mpaghara ala nke ihuenyo ahụ.
Rịba ama: Akaụntụ Google nke ị hapụrụ tinyere YouTube ga-anọgide na-abanye. Mgbe ị na-agba mbọ ịbanye na ya, a ga-enye gị "ntụziaka". Maka iwepụ kpamkpam, gaa na mpaghara ahụ "Akaụntụ Akaụntụ" (akara njirimara na mpịakọta mgbanwe akaụntụ), pịa ebe ahụ na aha nke ntinye abanye, wee dezie ihe odide nke dị na mpaghara ala nke ihuenyo "Wepụ akaụntụ sitere na ngwaọrụ"wee kwado atụmatụ gị na windo popup.
Dịka nke ahụ, na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị nuances na ọ nweghị nhụsianya ọ bụla maka onye ọrụ ahụ, onye ọrụ ahụ na-apụ na akaụntụ YouTube na ngwaọrụ mkpanaka Apple.
N'agbanyeghị na ọ dị mfe ikwu okwu banyere isiokwu a, ọ nweghị ezigbo ngwọta, ọbụlagodi na ihe nchọgharị na PC na ngwaọrụ mkpanaka na gam akporo. Ịbanye na akaụntụ YouTube ga-apụta na ịbanye na akaụntụ Google gị, nke, n'aka nke ya, kwụsị mmekọrịta mmekọrịta data ma gbochie ohere ịnweta ọtụtụ n'ime ọrụ na ọrụ ndị ọkachamara ọchụchọ na-enye.
https://termotools.com ig.termotools.com © Teamviewer 2019